Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi: Ọrụ Email siri ike maka Agency ma ọ bụ Business | Martech Zone
Monday, March 16, 2015 Bọchị Sọnde, Machị 15, 2015 Douglas Karr
Otu onye na-enye ọrụ email nke anyị na-akọrọghị banyere ya mgbasa Ozi Nyochaa. A na-asọpụrụ ha mgbe niile na ụlọ ọrụ maka akụkọ ha pụtara ìhè, mana ha aghọwo ndị na-eweta ọrụ email siri ike maka azụmaahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ.
Fọdụ n'ime atụmatụ pụrụ iche nke Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
mbọn - Mgbasa Ozi Mgbakwunye anaghị agbakwunye ikike nke logos na ozi ịpụ apụ na njirimara onye ọrụ nwere ike ịcha ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị.
iPhone na-akọ - Campaign Nyochaa azụlitewo a ezigbo oge nlekota na akuko ngwa maka iPhone.
mobile - Emebere ndebiri ndebanye aha maka ndị ahịa desktọọpụ na ngwaọrụ mkpanaka. I nwekwara ike ihuchalu ihuenyo nke desktọọpụ ma ọ bụ nsụgharị mkpanaka n'ime ikpo okwu karịa ndị ahịa 20.
Idenye aha Facebook - Ngwa ntinye aha Facebook na - eme ka ọ dị mfe idobe ụdị ntinye aha na ibe Facebook gị.
Social Media - A na-enyekọrịta mmekọrịta mmadụ na mkpesa.
Ọdịnaya Dynamic - Hazie ederede gosipụtara, onyonyo ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dabere na ụkpụrụ ubi.
A / B Kewaa Ule - Nwalee ọdịiche abụọ nke mkpọsa email gị, wee ziga onye kachasị mma.
Nyocha Ule - Gbaa mkpọsa gị site na nzacha spam na-ewu ewu na desktọọpụ, ihe nkesa na firewall larịị tupu izipu ya. DomainKeys, Nzipu NJ, na nzaghachi nzaghachi maka ịgbakwunye nnyefe.
Google Analytics - Na-akpaghị aka soro ahịa gị na mgbasa ozi na ntụgharị na Google Analytics.
Ndị nọ na Mgbasa Ozi Mgbasa ozi etinyela nke ha email onye na-ewu ụlọ gaa ebe ahụ maka onye ọ bụla iji! Ha edebewokwa ụlọ ọrụ ahụ Ntuziaka kachasị mma maka nkwado CSS na ngwa ndị ahịa email.
Ezigbo nchịkọta akụkọ email, nkewa, API, na igwe templating na igwe bụ akụkụ nke mgbasa Ozi Nyochaa ikpo okwu. Jide n'aka tinye ha na ndepụta nke ESP iji nyochaa!
Tags: onye na-enye ọrụ email ụlọ ọrụmgbasa Ozi Nyochaacss nkwado na emailemail ahịa cssonye na-enye ọrụ emailemail onye na-ewu ụlọemail ndebiriespemail mkpanakawhitelabel esp